မှန်ကြည့်တိုင်း စိတ်ချမ်းသာချင်ရင် New Skiin Foam Cleanser ကို ရွေးချယ်လိုက်ပါ ☺️ မျက်နှာလေး Cleansing လုပ်ပြီးတိုင်း စိတ်ကျေနပ်ဖို့ဆို New Skiin Foam Cleanser သုံးပါနော် ? ? တင်းတိပ်မှဲ့ခြောက် ပျောက်ကင်းပြီး အသားအရေ ညီညာ ကြည်လင် ဖြူစင်ဖို့ အဝါရောင်လေးကို သုံး ? အသားအရေတင်းရင်းပြီး အစိုဓာတ် ထိန်းသိမ်းချင်သူ အသားအရေခြောက်သွေ့သူဆို အပြာရောင်လေးကို သုံး ? ဝက်ခြံ ဆားဝက်ခြံ အဆီဖု ပျောက်ကင်းပြီး အဆီပြန်တဲ့သူဆို ခရမ်းရောင်လေးကို သုံး ဘယ်လိုအသားအရေအမျိုးအစားပဲဖြစ်ဖြစ် Sensitive Skin ပိုင်ရှင်းများလဲ ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ New Skiin Foam Cleanser (150g) တစ်ဗူး - ၁၀,၀၀၀ ကျပ်
ဝက်ခြံ အဆီဖုနှင့် ဆားဝက်ခြံတွေ ပျောက်ကင်းစေဖို့ Salicylic ? ? New Skiin Foam Cleanser Salicylic မျက်နှာသစ်ဟာ အရေပြားဆဲလ်အသေများကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အသားအရေကို စိုပြေလန်းဆန်းစေကာ ချွေးပေါက်ပိတ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ အသုံးပြုသင့်သူများ - အဆီပြန်သောအသားအရေရှိသူများ၊ ဝက်ခြံထွက်သောအသားအရေရှိသူများ၊ ဆားဝက်ခြံနှင့် အဆီဖုပျောက်ကင်းလိုသူများ New Skiin Foam Cleanser (150g) တစ်ဗူး - ၁၀,၀၀၀ ကျပ်
မျက်နှာအသားအရေ တင်းရင်းနုပျိုစေဖို့ Collagen ? ? New Skiin Foam Cleanser Collagen မျက်နှာသစ်ဟာ ? Collagen ကြွယ်ဝစွာ ပါရှိတာကြောင့် အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို အကောင်းဆုံး ဆန့်ကျင်ပေးပြီး နုပျိုတင်းရင်းမှုကို ပေးစွမ်းပါတယ်။ အသုံးပြုသင့်သူများ - အသားအရေခြောက်သွေ့သူများ၊ အသားအရေတင်းရင်းလိုသူများ၊ အသားအရေ အစိုဓါတ် ထိန်းသိမ်းလိုသူများ New Skiin Foam Cleanser (150g) တစ်ဗူး - ၁၀,၀၀၀ ကျပ်
မျက်နှာအသားအရေ ကြည်လင်၊ ဖြူစင်ဝင်းပစေဖို့ Vitamin C ? ? New Skiin Foam Cleanser Vitamin C မျက်နှာသစ်ဟာ ? Vitamin C ပြည့်ဝစွာဖြင့် ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့် ညစ်နွမ်းတဲ့ အသားအရေကို ကြည်လင်တောက်ပစေပါတယ်။ အသုံးပြုသင့်သူများ - ပုံမှန် အသားအရေရှိသူများ၊ တင်းတိပ်မှဲ့ခြောက်ပျောက်ချင်သူများ၊ အသားအရောင် ညီညာလိုသူများ၊ အသားဖြူစင်ဝင်းပချင်သူများ New Skiin Foam Cleanser (150g) တစ်ဗူး - ၁၀,၀၀၀ ကျပ်
ဝက်ခြံနှင့် အဆီဖုတွေအတွက် အကောင်းဆုံး ??? Toner ??? ကိုကို့ကို Spicy အနက်ရောင် ထုတ်လေး ပူဆာပြီးရင် အပူအစပ်တွေကြောင့် ထွက်လာတဲ့ အဆီဖု ဝက်ခြံတွေအတွက်လဲ New Skiin Brightening Exfoliation Toner လေးကို ထပ်ပူဆာလိုက်ဦးနော် ? သံပုရာသီး၊ သံပုယိုသီး၊ ? လိမ္မော်သီးတို့မှ ရရှိသော AHA Citric Acid ကို ထည့်သွင်းထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့် အရေပြားချွေးပေါက်များကိုသန့်စင်ပေးပြီး ဆားဝက်ခြံများကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ ချွေးပေါက်ကင်းစင်ပြီး ချောမွတ်သော အသားအရေကိုရရှိစေပါတယ်။ ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်စွမ်းအား ပါဝင်တာကြောင့် အရေပြား အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ အရေပြားရဲ့ အဆီဓါတ်မျှတမှုကို ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။ Exfoliation Toner ဖြစ်တာကြောင့် အဆီပြန်ပြီး ဝက်ခြံ ရှိသူတွေ အဆီဖု ရှိသူတွေအတွက် အထူးသင့်တော်ပါတယ်။ အသုံးပြုပုံ မည်သည့်အသားအရေအမျိုးအစားမဆို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ညအချိန် New Skiin Facial Foam ဖြင့် မျက်နှာသစ်ပြီး သန့်စင်သော အရေပြားပေါ်တွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Cotton pad ဖြင့် သင့်တော်သော ပမာဏထည့်ပြီး မျက်နှာနှင့်လည်ပင်းအနှံ့ အသုံးပြုပေးနိုင်သည်။ အရေပြားပေါ်အားပြင်းစွာဖြင့် ပွတ်ဆွဲခြင်းကို ရှောင်ကျဥ်ပါ။ ?? Low pH ?? Skin Brightening & Anti Wrinkle ?? Alcohol free New Skiin Brightening Exfoliation Toner (150 ml) တစ်ဘူး - ၁၈,၀၀၀ ကျပ်
အရေပြား ပြဿနာတိုင်းကို ဖြေရှင်းပေးမယ့် Foam Cleanser ??? ? တင်းတိပ်မှဲ့ခြောက်တွေ ဖယ်ရှားဖို့ဆို အဝါရောင် Vitamin C လေးသုံး ? အသားအရေခြောက်သွေ့ပြီး အသားအရေတင်းရင်းဖို့ဆို အပြာရောင် Collagen လေးသုံး ? အဆီပြန် ဝက်ခြံ ဆားဝက်ခြံ အဖီဖု ပျောက်ကင်းဖို့ဆို ခရမ်းရောင် Salicylic Acid လေးသုံး ဘယ်လို အရေပြား ပြဿနာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ??? အရောင်လေး (၃) ရောင်က ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ New Skiin Foam Cleanser (150g) တစ်ဗူး - ၉,၅၀၀ ကျပ်
အဆီပြန်ပြီး ဝက်ခြံ၊ အဆီဖုနဲ့ ဆားဝက်ခြံကြောင့် စိတ်ညစ်နေသူများအတွက် ထိရောက်သော သန့်စင်မှု ? မျက်နှာအဆီပြန်ပြီး ဝက်ခြံ အဆီဖုတွေ နှင့် ဆားဝက်ခြံကြောင့် စိတ်ညစ်နေတယ်ဆိုရင် New Skiin Foam Cleanser Salicylic နဲ့ Nano Brush လေးကို တွဲသုံးကြည့်နော် New Skiin Foam Cleanser Salicylic က မျက်နှာ အသားအရေကို စိုပြေလန်းဆန်းစေပြီး အညစ်အကြေးများကို သန့်စင်ပေးပါတယ်။ Salicylic Acid က အရေပြားဆဲလ်အသေများကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ချွေးပေါက်ပိတ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ အဆီပြန်ပြီး ဝက်ခြံများ၊ ဆားဝက်ခြံနှင့် အဆီဖုများကို ပျောက်ကင်းသက်သာစေပါတယ်။ Nano Brush က အရေပြားကို ချွေးပေါက်အတွင်းပိုင်းအထိ လွယ်ကူစွာ သန့်စင်ပေးပြီး ဆားဝက်ခြံများ၊ ချွေးပေါက်ပိတ်ခြင်းများကိုလည်း စင်ကြယ်စွာ သန့်စင်ပေးပါတယ်။ New Skiin Foam Cleanser (150g) တစ်ဗူး - ၉,၅၀၀ ကျပ် Nano Brush တစ်ခု ၁၂,၀၀၀ ကျပ်
တင်းတိပ် အမဲစက် မှဲ့ခြောက် ရှိသူများအတွက် Skin Care ?‍♀️ အသားအရေ မညီညာပဲ တင်းတိပ် အမဲစက် မှဲ့ခြောက်တွေကြောင့် စိတ်ညစ်နေတဲ့ သူလေးတွေအတွက် Day and Night Skin Care Set လေး ပြောပြပေးမယ်နော် ? ဒီ Skin Care Set လေးကို ပုံမှန် သုံးပေးမယ်ဆိုရင် အသားအရေ ကြည်လင် ဖြူဝင်းတောက်ပ လာပြီး အမဲစက် တင်းတိပ် မှဲ့ခြောက်များ သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ မနက်ခင်းဆိုရင် New Skiin Foam Cleanser Vitamin C နဲ့ မျက်နှာသစ်ပြီး New Skiin All In One Tone Up Cream လေးကို အသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်။ ညပိုင်းဆိုရင် New Skiin Foam Cleanser Vitamin C နဲ့ မျက်နှာသစ်ပါ။ မျက်နှာသစ်ပြီးရင် New Skiin Brightening Exfoliation Toner ကို Cotton pad လေးနဲ့ အသုံးပြုပြီးပါက New Skiin Aqua Luminous Sleeping Cream လေး လိမ်းပေးမယ်ဆိုရင် မနက်ရော ညရော ပြည့်စုံသွားပြီနော် Sensitive အသားအရေပိုင်ရှင်များပါ အသုံးပြုလို့ရပြီး မြန်မာနိုင်ငံ FDA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိထားတာဖြစ်လို့ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ New Skiin Foam Cleanser (150g) တစ်ဗူး - ၉,၅၀၀ ကျပ် New Skiin All In One Tone Up Cream (5 g) တစ်ထုပ် - ၃,၅၀၀ ကျပ် New Skiin Brightening Exfoliation Toner (150 ml) တစ်ဘူး - ၁၈,၀၀၀ ကျပ် Aqua Luminous Sleeping Cream (100 g) တစ်ဘူး - ၁၉,၅၀၀ ကျပ်